I-Hydraulic jack umenzi womkhiqizi & abahlinzeki be-crane yenjini | Endont jack
Kusukela ngo-2006, i-EPOT jack iyimishini yokulungisa izimoto enobuchwepheshe (i-hydraulic jacks, injini ye-crane).
Eminye imishini yokuphakamisa
Umkhiqizi we-Hydraulic Jacks ochwepheshe
Le nkampani isebenza kakhulu ocwaningweni, ekuthuthukisweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwe-Crane ehlukahlukene yenjini, ama-hydraulic jacks kanye nemikhiqizo yemishini ye-hydraulic.
Imikhiqizo ye-EPONT jack
I-EPOTT jack ibalwa njengomunye wabahlinzeki bePorta Power Back abaholayo, sikhiqiza umkhiqizo obanzi we-porta jack uJack umkhiqizo omuhle kakhulu ngokunemba okukhulu nokunemba okuhlukile. Imikhiqizo yethu ivumelana nezidingo ezahlukahlukene zomhwebi kusuka emashumini eminyaka, sithuthukise imishini yethu yokukhiqiza kanye namakhono wabaphathi abaqeqeshiwe, onjiniyela kanye nochwepheshe.
Khipha umphakeli webhodlela le-hydraulic elijwayelekile kakhulu
I-EPONT engcono kakhulu ye-hydraulic ibhodlela le-hydraulic ibhodlela jack, inkampani iqoqo le-crane ehlukahlukene yenjini, i-floor jack 3t, i-floor tract jack, i-floor tracking jack ibhizinisi elikhethekile lomzimba lokucwaninga, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa kanye nokuthengisa.
Abakhiqizi be-TOPLAT BACK BACK
I-YipenGjack ibalwa njengomunye wabahlinzeki bePorta Power Back abaholayo, sikhiqiza umkhiqizo ohlukahlukene we-porta uJack uJack umkhiqizo omuhle kakhulu ngokunemba okukhulu nokunemba okuhlukile. Imikhiqizo yethu ivumelana nezidingo ezahlukahlukene zomhwebi kusuka emashumini eminyaka, sithuthukise imishini yethu yokukhiqiza kanye namakhono wabaphathi abaqeqeshiwe, onjiniyela kanye nochwepheshe. Ikhwalithi nezici ezihlala isikhathi eside zamandla ethu e-porta jack kuyancomeka futhi kuyaziswa amakhasimende ethu atholakala ezimibheni ezahlukahlukene zemakethe. Uhla lwemikhiqizo yethu lufaneleke kakhulu kumakhasimende ngoba amandla ethu e-porta jack anikezwe yi-US anikezwa ukwanelisa izidingo ezahlukahlukene zamakhasimende.
Abakhiqizi abakhethekile abakhethekile be-Hydraulic Bottle Jack
I-YipenGjack ibalwa njengomunye wabahlinzeki bePorta Power Back abaholayo, sikhiqiza umkhiqizo ohlukahlukene we-porta uJack uJack umkhiqizo omuhle kakhulu ngokunemba okukhulu nokunemba okuhlukile. Imikhiqizo yethu ivumelana nezidingo ezahlukahlukene zomhwebi kusuka emashumini eminyaka, sithuthukise imishini yethu yokukhiqiza kanye namakhono wabaphathi abaqeqeshiwe, onjiniyela kanye nochwepheshe. Ikhwalithi nezici ezihlala isikhathi eside zamandla ethu e-porta jack kuyancomeka futhi kuyaziswa amakhasimende ethu atholakala ezimibheni ezahlukahlukene zemakethe. Uhla lwemikhiqizo yethu lufaneleke kakhulu kumakhasimende ngoba amandla ethu e-porta jack anikezwe yi-US anikezwa ukwanelisa izidingo ezahlukahlukene zamakhasimende. Siqinisekisa ukuthi izindleko zezinsizakalo zethu zincane.
Umhlabeleli we-welding hydraulic ibhodlela jack umphakeli
Insizakalo yokwenza ngokwezifiso izidingo zebhizinisi ezihlukile noma eziyinselele.
I-EPTEN MeAnger iqoqo le-crane ehlukahlukene yenjini, i-hydraulic jack, i-jack 3t ephansi, i-floor track 3t, i-floor ukuhambisa jack okuyibhizinisi elikhethekile lomzimba lokucwaninga, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa kanye nokuthengisa.
1. Sineziqu: Sinesitifiketi sesiqu esisemthethweni
2. Ukukhiqiza Ubuchwepheshe: Ucwaningo Oluqhubekayo Nokuqamba kabusha
3. Ukwaneliseka kwamakhasimende: Nikeza umkhiqizo ogculisayo
I-EPONT Jack Case
Ikhwalithi nezici ezihlala isikhathi eside zamandla ethu e-porta jack kuyancomeka futhi kuyaziswa amakhasimende ethu atholakala ezimibheni ezahlukahlukene zemakethe. Uhla lwemikhiqizo yethu lufaneleke kakhulu kumakhasimende ngoba amandla ethu e-porta jack anikezwe yi-US anikezwa ukwanelisa izidingo ezahlukahlukene zamakhasimende. Siqinisekisa ukuthi izindleko zezinsizakalo zethu zincane.
Le nkampani isebenza kakhulu ocwaningweni, ekuthuthukisweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwamaJacks ahlukahlukene we-hydraulic kanye nemikhiqizo yemishini ye-hydraulic.I-YipenGjack ibalwa njengomunye wabahlinzeki bePorta Power Back abaholayo, sikhiqiza umkhiqizo ohlukahlukene we-porta uJack uJack umkhiqizo omuhle kakhulu ngokunemba okukhulu nokunemba okuhlukile. Imikhiqizo yethu ivumelana nezidingo ezahlukahlukene zomhwebi kusuka emashumini eminyaka, sithuthukise imishini yethu yokukhiqiza kanye namakhono wabaphathi abaqeqeshiwe, onjiniyela kanye nochwepheshe.
Sinentuthuko efanelekile, iqembu lokukhiqiza neqembu labathengisi abahle kakhulu.
Zhejiang yipeng mishini Co, Ltd.was esungulwe maphakathi ne-Yangtze River Delta Belt Belt City, Jiaxing, lapho kusondele khona eShanghai, i-Hangzhou, i-ningbo, iSuzhou City, njll, lokho kulula kakhulu ukuthutha . Le nkampani iqoqo le-crane ehlukahlukene yenjini, i-floor jack 3t, i-floor ukuhanjiswa jack okuyibhizinisi elikhethekile lomzimba lokucwaninga, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa kanye nokuthengisa.